Kedu isi ihe nwere ike inyere m aka ka mma na backlinks DoFollow?
Na-achọ ebe nrụọrụ weebụ ma ọ bụ blọọgụ ga-akasị mma maka backlinks DoFollow, ma eleghị anya ị ga-eche banyere ịkọ akụkọ blog, akwụkwọ ozi ndị ọbịa, ndekọ na ntinye nchịkwa azụmahịa, na na. N'ezie, ị nwere ike ịchọta ezigbo ngwọta dị mma maka njikọ dị elu na njikọ ebe ahụ. Ma, ihe kpatara ya bụ, enwere ngwọta kachasị mma ga-abụ ihe kachasị mma maka ndị na-eme DoLollow backlinks karịsịa? Enwere m ọnọdụ ụfọdụ maka gị.
Ma tupu ị nyochaa nke ọ bụla n'ime ha, ka anyị jiri obere ntakịrị nkowa malite.E kwuwerị, gịnị kpatara ị ga-eji mee ha na ebe nrụọrụ weebụ gị ma ọ bụ blog? Na-eme ike gị iji nweta akara azụ azụ DoFollow, ụdị uru dị aṅaa ka anyị nwere ike ịtụ anya n'aka ha?
Uru Kasị Mma nke DoFollow Backlinks
mụbara Search okporo ụzọ na-eduga kpọmkwem na saịtị ma ọ bụ ibe weebụ;
ike ngalaba ngalaba na-enye nkwado na-adịgide adịgide maka arụmọrụ gị;
bulie CPC AdSense gị (ọnụahịa kwa pịa);
kwalite ọganihu ị na-aga n'ihu na Google PageRank;
meziwanye Nchọpụta Ọchụchọ Gị dị ugbu a ma kweta nkwalite gị ọzọ - portable corn grain dryers.
E nwere ihe dị ka iri na abuo n'ime ebe kachasị anya a na-atụ anya ka ị daa mma maka akara azụ na DoFollow. N'etiti ndị ọzọ, m ga-achọ ịkọwapụta ihe ndị na-esonụ dị n'ịntanetị dị ka eleghị anya ebe ndị kachasị mma iji nwee mmalite kickass maka njikọ njikọ na àgwà DoFollow. N'okpuru ebe m ga-amalite na Google Plus, YouTube, LinkedIn, iji kwụsị Blogger dot com. Ya mere, ka anyi gbadaa n'okwu a!
Ịbụ otu n'ime ebe nrụọrụ weebụ kachasị ewu ewu na Social Media, Google Plus ga-amarakwa dị ka nnukwu ụlọ ọrụ ọha na eze iji mee nkwado dị mma. maka weebụsaịtị ma ọ bụ blog gị. Kwere m ma ọ bụ na ọ bụghị, mana maka ụfọdụ ihe kpatara ya, ọrụ a dị elu site n'aka ndị nchọnchọ ụwa na-egosipụtakarị na ọtụtụ ndị na-enweghị nchịkọta weebụ na ndị nwe ụlọ na -. Ka o sina dị, ana m akwado ịnwale akaụntụ nkeonwe gị n'ebe ahụ - iji nweta akara azụ azụ DoFollow na ikike dị elu naanị n'ime nkeji.
Enwere ike iji vidio vidio a dị egwu na-eme ka ị nweta ụfọdụ backlinks - naanị ịmepụta onwe gị ma jupụta mpaghara "banyere". Otú ọ dị, ime otú a, ị nwere ike inwe naanị backlinks NoFollow. Iji nweta backlink bara uru nke dị na DoFollow, ị ga-achọ ịlele usoro ntọala dị elu. N'ụzọ dị otú a, pịa "njikọ weebụsaịtị" yana naanị tinye ebe URL gị. Rịba ama, iji mee ka usoro ahụ rụọ ọrụ nke ọma, ị ga-ebufe usoro nkwenye gị na Google Webmaster Tools mbụ.
Ọ bụghị naanị ebe dị mkpa ịmepụta netwọk nke ọrụ ọkachamara na nke azụmahịa, kama ọ bụ ohere magburu onwe ya ịnweta ikike abụọ dị elu azụlink - a pụkwara igosi ha ndị nwere mmasị na ndị si n'akụkụ ụwa nile. Ma ịchọrọ ịhapụ ya, nri? Iji mepụta backlink ọzọ na njirimara DoFollow na LinkedIn - naanị mepụta profaịlụ onwe gị, jiri minit abụọ mejupụta ngalaba ndị dị mkpa, ma kesaa njikọ dịka ọmụmaatụ gaa na biputere gị, nyochaa ngwaahịa, wdg.Ụzọ ahụ, ma eleghị anya njikọ ọ bụla ị ga-eso na-aga ịghọ ihe bara uru. Mmetụta, eh?
Nchịkọta Blogger COM
Nchịkọta nchịkọta akụkọ a abụghị nke a ma ama, mana m na-esi ọnwụ ka ị nyochaa ya n'ọnọdụ ọ bụla. Nke a bụ otu ị ga-esi nweta backlink na DoFollow n'ebe ahụ - dịka ịmepụta bọtịnụ nkwado ọhụrụ gị na Blogger dot com, ma kwụọ oge iji jupụta ọdịnaya dị mma. Jikọọ ụlọ ọrụ azụmahịa gị ma ọ bụ blog - na ị meela!